Magaalada NY ayaa Adeegsatay Isku-dhafnaan Cusub oo Ellicott ah oo Dib Loogu Soo Celinayo Xeebaha-Ellicott Dredges
Magaalada New York si ay u isticmaasho cagaheeda cusub ee Ellicott® Brand si ay u soo celiso xeebaha kadib duufaanta
Source: Elmontcivic.com / Waxaa Qoray Maamulaha
Bulshada badweynta ee loo yaqaan 'Point Lookout' waxaa la degay duufaano dhawaanahan dabeylo watay, oo ay ku lumiyeen illaa 250,000 yacdi yadhish oo ciid ah oo ku teedsan xeebta. Kormeeraha Magaalada Hempstead Kate Murray iyo Senator-ka Gobolka Dean Skelos ayaa ku soo biiray shir jaraa'id oo ka socda Freeport si loo yareeyo qorshe lagula dagaallamayo nabaad-guurka xeebaha. Sidoo kale Shirka Jaraa'id ee lagu soo bandhigayo ceelka badda ee dhowaan la keenay magaalada, kaas oo lagu soo qaatay sanduuqa Dean Skelos / Assemblyman Harvey Weisenberg, waxaa ka mid ahaa Golaha Deegaanka Angie Cullin, Karaaniga Magaalada Mark Bonilla, Qaataha Canshuuraha Don Clavin iyo hoggaamiyeyaasha bulshada iyo bulshada. . Daadku wuxuu ciid ka qaadi doonaa aagagga ay ku urursan yihiin wuxuuna walxahaas ku shubi doonaa xeebaha maxalliga ah ee xaalufin.
"Godkan cusubi wuxuu muhiim u yahay la dagaallanka nabaad-guurka xeebta iyo ilaalinta guryaha maxalliga ah, ganacsiyada iyo dadka deegaanka," ayuu yiri Murray. "Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo Senator Dean Skelos sida uu uhelay maalgalinta qalabkan muhiimka ah."
Hempstead Town ayaa qaadatay geynta, oo loo soo ururin doono sida qalabka wax lagu dhejiyo bilaha soo socda si loogu diyaar garoobo bilowga guga. Xaqiiqdii, Murray iyo Cullin waxay gacan ka geysteen adkeynta qaar ka mid ah boolisyadii ugu horreeyay iyadoo qayb ka ah shixnadda doonta.
Hempstead Town waa midda kaliya ee degmooyinka dagmada leh ee leh dhul cabbir dhexaad leh oo loogu talagay soo celinta xeebaha. Qulqulka, boodhka shaqada iyo cagaha 8,000 ee tuubbooyinka si loo dhaqaajiyo loona buuxiyo ciidda waxaa lagu iibsaday $ 1.14 milyan. Senator-ka Gobolka New York Dean Skelos wuxuu xaqiijiyey $ 1.1 milyan oo doolar iibka magaalada oo ay magaaladu ku kordhisay $ 41,000 dheeraad ah.
"Hempstead Town marinteeda badda waxay faa'iido weyn u noqon doontaa bulshada Point Lookout," ayuu yiri Senator Skelos. "Qalabka saxda ah ee lagu soo celinayo ciidda xeebaheena iyo xoojinta meeraha ciidda, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan si wanaagsan uga ilaalino dadka deegaanka, guryaha, iyo ganacsiyada khataraha duufaanta iyo nabaad-guurka xeebta."
Tan iyo markii Xeebta Lookuut Loogu Talagalay ay ugu dambaysay Maarso 2008, inta u dhaxaysa 50 ilaa 75 fuudh oo xeebta ah ayaa lagu lumiyay nabaad guur. Halkii ay ku tiirsanaan laheyd Ciidamada Mareykanka ee Injineerada inay dib u buuxiyaan xeebaha, magaalada waxay hada awood u yeelan doontaa inay wax ka qabato dhibaatooyinka xeebta si deg deg ah oo dhameystiran.
"Tani waa faa iido weyn bulshada Point Lookout," ayay tiri Cullin oo ka tirsan Golaha. "Guryaha aagagga iyo ganacsiyada ayaa sifiican looga ilaalin doonaa halista duufaanta iyo halista daadadka ee qashin qubka iyo dib u soo celinta ciidda waxaan hadda awoodi doonnaa inaan si toos ah u sameyno."
Kahor Bishii Maarso 2008 Mashruucii Injineerada Ciidanka ee qariyey Jones Inlet oo xirmay isla markaana saarey ciida xeebta ku teedsan, biyaha badweynta ee qulqulaya ayaa jabiyey godadka dunnida waxayna ku qulquleen jidadka la deggan yahay ee Point Lookout. Dooxadu waxay u oggolaan doontaa magaalada inay wax ka qabato baahiyaha muhiimka ah, oo ay ka mid tahay xoojinta xargaha si looga hortago jebinta. Sanduuqyada ciiddu waa khadka ugu dambeeya ee difaaca ee u dhexeeya badweynta iyo guryaha aagga, dhismayaasha iyo waddooyinka, xasilinta dunnida ayaa muhiim u ah ilaalinta nolosha iyo hantida bulshada xeebta ku teedsan. Intaa waxaa sii dheer, qodku wuxuu buuxin doonaa dadaalka magaalada ee lagu taageerayo Mashruuca Yaraynta Duufaanta Long Beach oo wax laga badalay si looga ilaaliyo bulshooyinka Long Beach Island duufaanada sare iyo hirarka iyadoo la dhisayo gumaarka cusub lana xoojinayo kuwii hore.
Magaaladu waxay rajaynaysaa inay ciid ka dhaqaaqdo dhinaca waqooyi-bari ee Point Lookout xagga bari iyo koonfurta bari ee bulshada badweynta ee aagagga kale. Qulqulka ayaa la filayaa inuu shaqeynaado xilliga guga 2010.
“Mararka qaar qodista 'alaabtii hore' waxay noqon kartaa wax fiican, iyo ciida aan ka saari doonno kanaallada maxalliga ah si loogu buuxiyo xeebta duufaanku ku habsaday waa wax aad ugu fiican dadka deggan badweynta iyo milkiileyaasha ganacsiga,” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Murray. "Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Senator Dean Skelos iyo Harman Weisenberg oo ka tirsan golaha wakiilada sida ay u xaqiijiyeen lacagtii loogu talo galay qodaalka iyo dadka deegaanka oo nala wadaagey la dagaalanka nabaad-guurka xeebaha."
Waxaa dib looga daabacay Elmontcivic.com